ရန်သူလား မိတ်ဆွေလား - FunnyPC
by H - December 26, 2019
တခါတုန်း ကပေါ့ ...
ရွာလေး တရွာမှာ လူနှစ်ယောက်ဟာ အိမ်နီးနားချင်းတွေ အဖြစ် နေကြတယ် ။ တဦးက လယ်သမား ဖြစ်ပြီး နောက်တဦး ကတော့ မုဆိုးတယောက် ဖြစ်ပါတယ် ။ လယ်သမားဟာ သူနေတဲ့ အိမ်ကလေးမှာ ဘဲတွေမွေးထားတယ် မုဆိုးကတော့ သူ့ခြံဝန်းထဲမှာ အမဲလိုက်ခွေးတွေ မွေးမြူထား ခဲ့တယ် ။
မကြာခဏ ဆိုသလို ပါပဲ အမဲလိုက်ခွေးတွေဟာ လယ်သမားရဲ့ ခြံထဲကို ဝင်ရောက်ပြီး လယ်သမား မွေးထားတဲ့ ဘဲတွေကို သတ်ဖြတ် စားသောက်လေ့ ရှိကြတယ် ။
လယ်သမားက အဲဒါနဲ့ မုဆိုးဆီသွားပြီး အမဲလိုက်ခွေးတွေကို ထိမ်းသိမ်းထားဖို့နဲ့ လွှတ်မထားဖို့ အကြိမ်ကြိမ် တောင်းဆိုခဲ့တယ် ။ ဒါပေမယ့် မုဆိုးဟာ နေမြဲအတိုင်း နေပြီး ခွေးတွေကို ဒီအတိုင်း လွှတ်ထား ခဲ့တယ် ။ နောက်ဆုံးတော့ လယ်သမားဟာ လုံးဝကို သည်းမခံနိုင်တော့ပဲ ရွာမှာရှိတဲ့ အကြီးအကဲဆီ သွားပြီး မုဆိုးရဲ့ ခွေးတွေကို အရေးယူပေးဖို့ တောင်းဆို ခဲ့တယ် ။
“ အဲဒီ မုဆိုးကို ကျုပ်က အရေးယူပေးလို့ ရပါတယ် ... ခွေးတွေကိုလည်း ချုပ်နှောင်ထားဖို့ အမိန့်ပေးလို့ရပါတယ် အဲဒီလို လုပ်လိုက်မယ် ဆိုရင် ခင်များမှာ မိတ်ဆွေကောင်း အိမ်နီးနားချင်း တစ်ယောက် ဆုံးရှုံးသွားနိုင် ပါတယ် ... ခင်ဗျားနဲ့ အတူ နေရတယ့် အိမ်နီးနားချင်းကို ရန်သူ ဖြစ်စေချင်သလား မိတ်ဆွေ ဖြစ်စေချင်ပါသလား ”
လယ်သမားက တချက် စဉ်းစားလိုက်ပြီး “ မိတ်ဆွေပဲဖြစ် စေချင်ပါတယ် ” ဖြေလိုက်တယ် ။ အဲဒီအခါ အကြီးအကဲက ဆက်ပြောတယ် ။ “ ကောင်းပါပြီ ဒါဆို ကျုပ်အကြံ တစ်ခု ပေးပါ့မယ် ဘဲတွေ မဆုံးရှုံးစေရလို မိတ်ဆွေ တစ်ယောက် တိုးလာ ပါလိမ့်မယ် ”
လယ်သမားက အကြီးအကဲ ပြောတဲ့အတိုင်း အိမ်ကိုပြန် သွားတယ် ။ ပြီးတော့ အိမ်မ ောမွေးထားတဲ့ ဘဲတွေထဲက အလှဆုံး ဘဲ လေးကောင်ကို ရွေးပြီး မုဆိုးရဲ့ သားလေးယောက်ကို လက်ဆောင် အဖြစ် ပေးလိုက်တယ် ။
လက်ဆောင် ဘဲလေးတွေနဲ့ နေ့တိုင်း ပျော်ရွှင်စွာ ကစားနေတဲ့ သားလေးယောက်ကို တွေ့တဲ့ အခါ မုဆိုးဟာနေ့တိုင်း ဝမ်းသာ ကြည်နူးနေရတယ် ။
ပြီးတော့ သားလေးတွေ လက်ဆောင် ရထားတဲ့ ဘဲတွေကို ကိုက်စားမှ ာစိုးလို့ အမဲလိုက်ခွေး တွေကို သေချာ လှောင်ထားလိုက် ပါတော့တယ် ။ လယ်သမားကိုလည်း ကျေးဇူးတွေ တင်ပြီး အမဲလိုက်လို့ ပြန်လာတဲ့အခါ အသားတွေကို ဝေငှပေးတတ် လာပါတယ် ။
လယ်သမားကလည်း ခြံထွက် သီးနှံတွေနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ဘဲဥတွေကို လက်ဆောင် အဖြစ် မုဆိုးကို ပေးခဲ့တယ် ။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့နှစ်ဦးဟာ အိမ်နီးချင်းကောင်းတွေ ဖြစ်လာကြ ပါတယ် ။
ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ တခုတည်းကိုပဲ ဦးစားမပေးပါနဲ့ ။ သူ့ဖက်ကိုလည်း စာနာပြီး ဦးစားပေးတတ် မှသာ ရန်သူဘဝကနေ မိတ်ဆွေ ဖြစ်သွားနိုင် တာပါ ။
သင်ရော .... ရန်သူလိုချင်တာလား ??? မိတ်ဆွေလိုချင်တာလား ??? ။